DRC: Maxkamada Dacwad oogista Moallah Katumbi ayaa ku xukuntay saddex sano oo xabsi ah - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY Maxkamad ku taala dalka Kenya oo xukun dil ah ku riday Maxkamad ku taala dalka Uganda
Maxkamadda Cassation ayaa ka laabatay xukunkii Moses Katumbi saddex sano oo xabsi ah, oo ay ku dhawaaqday maxkamadda cadaaladda ee loo yaqaan "Lubumbashi" ee maxkamadda caddaaladda kiis ku saabsan kharribaad hantiyeed. Qareenkiisa wuxuu yiri "Ma jiro wax ka horimanaya soo laabashadiisa".
Go'aanka Maxkamadda Dhageysiga, oo taariikhdeedu ahayd April 17, "waa la joojiyay xukunka lagu sameeyay 21 June 2016 by Maxkamadda Nabada ee Lumumbashi / Kamalongo Ka soo horjeeda Moise Katumbi, oo lagu xukumay saddex sano oo xabsi ah. Garsoorayaasha ayaa sidoo kale caydhiyay xukunka hal milyan oo doolar oo magdhow ah oo la sheegay inay ka soo hor jeedeen kuwa kasoo horjeeda.
"Waxaan maxkamadaynay maxkamad ku taal 2018 si loo helo baajinta xukunkan. Waxaan dareemay in ay jirto wax isdhaafin ilaa nidaamka ah: marka maxkamadda Kamalondo Peace ka dhigay go'aanka, difaaca Muuse Katumbi lahaa mar hore soo bandhigay codsi maxkamadeed in la beddelo, sababtoo ah waxaan ka shakisan tahay barxadaha Lubumbashi midnimada. Iyadoo lagu dhawaaqey xukunkiisa, maxkamada ayaa diidday codsigayaga. Waa jebinta xuquuqda difaaca, "ayuu yiri Dhallinyarada Afrika Jean Joseph Mukendi, oo ah qareenka Moses Katumbi.
>>> READ - DRC: Waa maxay istaraatijiyadda Katumbi?
Xaaladdan oo kale, maxkamadda Lubumbashi waxay xukuntay in ay daneyneyso Alexandros Stoupis, oo ah muwaadin Giriig ah oo ku eedeeyay guddoomiyihii hore ee Katanga in uu u isticmaalo qoraallada qoraalka ah si uu ugu habboonaado jaangooyo oo uu sheeganayo inuu dhaxli lahaa. Kiiska ayaa ka qarxay muran buuxda u dhexeeya Joseph Kabila iyo Muuse Katumbi, kuwaas oo kaliya casilay taliyihii iyo Madaxweynaha Inter-Federaalka ee xisbiga Shacabka ee Dib u dhiska iyo Dimuqraadiyadda (PPRD). Wuxuu ku eedeeyay Kabila in ay doonayso in ay bedesho Dastuurka in ay sii joogaan awoodda.
"Waxba kuma jabin soo noqoshada Katumbi"
Muuse Katumbi, dacweeyay in kiiska kale oo khatar ammaanka ee Gobolka socda baaritaan ay xeer-ilaaliyaha guud oo looga shakisan yahay qoranayaan calooshood, mar hore ka tagay dalka ee May 2016, si rasmi ah si ay u bogsadaan.
>>> READ - DRC: Waa maxay Giriiggan qarsoodi ah ee ku guulaystay inuu Katumbi iyo Muyambo ku cadaadiyo caddaaladda?
Ka dib markii uu soo gudbiyay xukun, Lubumbashi / Kamalondo Peace Court Madaxweynaha Chantal Ramazani ayaa ka tegey waddanka ka hor inta aan loo dirin waraaq ay u dirtay sarkaaladooda oo dalbaday inay saxiixdid xukunka Muuse Katumbi waxaa loo tixgelinayaa inuu yahay mid aan waxba ka jirin. Waxay sheegtay in la cadaadiyay Kalev Mutond, ka dibna Madaxa Hay'adda Sirdoonka Qaranka, in ay xukumaan Katumbi. Ujeeddadu waxay ahayd, iyada fikradeeda, si loo helo xaq u lahaanshaha dambe ee.
Jean-Joseph Mukundu, oo leh xukunkan Maxkamadda Dhagaxbuur, "waxba lagama yaabo jidka loo soo celinayo Moife Catumbi", oo lagu khasbay in lagala wareego tan iyo 2016. "Waxaa jira kiis loo yaqaan 'mercenaries', oo lagu xukumay xitaa isagoo xoriyad ah, kiiskuna waa xilliga Maxkamadda Dastuuriga ah ee ku xadgudubta dastuurka," ayuu yiri qareenka.
8 xilli-ciyaareedkii ugu dambeeyay oo ku siijeeda FOX - News - Series Addict